Ukuthola acrylic zokugeza - fun, uveze amaqiniso njengoba enjalo, akuveli ezishibhile. Ngakho-ke, uma ukuthenga into ye ware enelanga, imikhiqizo kufanele kwenzeke ukuba nazo zonke izidingo zakho kanye nezidingo. Ukuze ukhethe izinga okusezingeni imishini sanitary idinga ukwazi ukuthi ubani ukhiqiza ke. Nge le njongo iyawakha ezihlukahlukene isilinganiso izinhlu abakhiqizi. Imakethe Russian of ware sanitary igcwele ama thini kokubili ukukhiqizwa baseYurophu abathuthela kule yasekhaya.
Ukukhetha okugeza, kufanele lapha igxila ngokuyinhloko umakhi, ngoba izindleko amapayipi akakabi ubufakazi bayo izinga okusezingeni eliphezulu, ukuba usizo, ukuthembeka nokuqina kwayo.
Futhi manje sibheka abakhiqizi YaseYurophu acrylic nakubhavu.
Ukukhiqizwa technology Riho zokugeza esekelwe ukusetshenziswa ishidi obukhulu acrylic, ukushuba yabo ifinyelela 8 mm. Kodwa, naphezu 'ngamanoni "yalo, nesisindo ubhavu kancane acrylic. Yikuphi nomkhiqizi kungcono ukuba banakekele iphrofayli kwemvelo imikhiqizo yabo, wathi kunzima. Zonke izinto sanitary zefanisha izinkampani European akunangozi ngokuphelele futhi abanalo imiphumela emibi empilweni yomuntu. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo ziphawulwe ungqimba zokuzivikela evimbela kumiswa isikhunta, isikhunta nezinto ezincane eziphilayo amagciwane.
Ravak Inkampani ( "Ravak") osesikhundleni udumo yesibili le rankings in futhi ukhiqiza eliphezulu acrylic nokugeza. Umenzi best of ware sanitary eYurophu ngilinqobile kokuhlaziywa umthengi eliphakeme, + njengasosukwini lokungivivinya imishini "Ravak" in the isilinganiso elilungile komculo iminyaka eminingi isipiliyoni lenkampani, ukuhambisana international namazinga izinga futhi premium. Bath 'Ravak "kukhona ezisindayo-duty imishini enelanga, okuyinto esetshenziswa ekwakheni ubuchwepheshe ezintsha.
Obunye ubuchwepheshe ezinjalo, futhi izindlela zokufinyelela lowo imikhiqizo engcono kubhekwe kwamangqamuzana Ukushisa ekhethekile sanitary acrylic ishidi ukudala ukugeza ngezinsalela ukujiya efanayo Nogange lwawo evele, ezithinta high zihlale zifudumele.
Libhekene lokunameka at 5-6 mm acrylic nokugeza. Kuhle umkhiqizi igcwalisa amapayipi substrate isici fiberglass iphathwa ngokukhethekile. Lokhu kwenza lo mlando amandla futhi rigidity iyonke. Kuyinto ngenxa eshiwo ngenhla ukukhiqizwa ubuchwepheshe siyithola Imiphumela ngendlela emangalisayo acrylic zokugeza ukukhuthazela "Ravak".
I okunezinhlobonhlobo okugeza umkhiqizi Czech ebanzi futhi enza izinto ezihlukahlukene - ungathola ezihlukahlukene imifanekiso kokubili izici design, futhi inqubo design futhi intengo nemingcele. Phakathi nemiphumela ethile engathandeki kuqashelwe ukuthi onobuhle ephansi ekupheleni kungukuthi ifakwe izesekeli, kodwa le nkinga ngokushesha ixazululwe, akunjalo?
Cersanit - nomkhiqizi best of ware sanitary ePoland kokubili ngokoMthetho izinga futhi ngezizathu intengo. Lezi zokugeza Polish abe ezingeni eliphakeme induduzo kanye namafomu enkulu classical, imigqa ezithambile lihle futhi umthamo omuhle. Ukuqoqwa acrylic zokugeza "Cersanit" ehlelekile olusha, kubonisa ukuthi inkampani igcina ijubane nalezi zikhathi futhi isebenzisa kuphela ubuchwepheshe bakamuva nje kanye namasu ekukhiqizeni imishini sanitary. Kasibili yonke imikhiqizo certified by HM Cersanit has emamaki izinga oneminyaka engu-7 sewaranti service lihle. Futhi zokugeza acrylic babe nemiphumela ethile engathandeki. umakhi Kuhle isebenzisa ultra-nomzimba omncane elwa namagciwane acrylic amashidi, okuyinto ayikuvumeli ukwakha obishini.
Kolo - ehola nomkhiqizi ware sanitary ngezizathu izindleko kanye nokubhaliswa design, okuyinto uyakucabangela ukuthambekela zakamuva umhlobiso ingaphakathi. namazinga izinga German futhi engakwazi ukukhuluma isiDashi, yonke imikhiqizo ebonisa "Kolo", ikakhulukazi, acrylic nakubhavu. Kuhle umkhiqizi kuqinisekisa izinga eliphezulu imikhiqizo yayo nge izitifiketi sokuhambisana ISO 9002. plus plus, kodwa kukhona futhi kukhona downsides, futhi ungomunye walabo yizinga enganele ukuqina okugeza odongeni evele ngoba ukufakwa imishini hydromassage.
TM Pool Spa
Uma ujwayele, njalo uthole kuphela best of the best, khona-ke ngawe ukudala Pool Spa ( «Pool futhi Spa") - nakubhavu acrylic. abakhiqizi Iningi isikhala European nezinye izikhundla silinganiso kuthathwa ukuthi inkampani Spanish esincintisana yayo esiqine. Eqinisweni, kubhavu "Spa Pool" - samuntu induduzo ephelele.
Design izici nekamelo lokugezela kuhilela ukufakwa imishini Hydro-massage, izibani ezengeziwe kanye neminye imininingwane ezihambisana ezintsha. Imikhiqizo yalesi brand has amandla eziphakemeyo kufezwa ngokusebenzisa ekhethekile acrylic enamathela Lucit, futhi unikeze ukuphepha futhi ihlala isikhathi eside. Zonke amamodeli thini brand zenziwa nge izitayela zakamuva kanye emisha, futhi "eyayigcwele" nazo zonke izinhlobo izesekeli. Ukuba khona labo noma nezinye izesekeli kunqunywa ethile okugeza imodeli.
Kusenza imishini "Pool futhi Spa" okugeza. Njengomthetho, ikhithi ejwayelekile kuhlanganisa-chrome izibambo, headrests, eshaweni amakhethini. "Pool futhi Spa" - sesimanje, kakhulu "fancy" futhi eqolo ubhavu acrylic. Yikuphi nomkhiqizi kungcono "nafarshiruyte" umklamo kanye izokhipha imikhiqizo yayo kanye ngesikhathi esifanayo ucele kakhudlwana futhi engcono intengo? Lesi sakamuva, ngenhlanhla, into kuphela lokho akunakubangelwa ukushiyeka amapayipi "Pool futhi Spa". Awu, niyazi, isaziso ngaphansi akubona bonke, ngakho umnqopho salo ungabaza sina.
Siye wachaza nakubhavu acrylic, okungcono abakhiqizi zifakwe isilinganiso uhlu ezingeni emhlabeni. Imikhiqizo Brands Riho, Ravak, Cersanit, Kolo, Pool Spa ekhiqizwa ngezindinganiso izinga international, has izitifiketi ezifanele, kanye izindondo eziningi futhi imiklomelo. inkampani ethile yaseYurophu - isihluthulelo lomkhiqizo nokuphila kwaso isevisi eside.
abakhiqizi Phezulu acrylic zokugeza eRussia
nakubhavu Acrylic bayindlala kakhulu phesheya hhayi kuphela, kodwa futhi kusuka kubathengi yasekhaya. Ziyakwazi compact, okulula ukuyiphatha, kulula ukufaka, unikeze umthwalo ubuncane phezu joists phansi, kakhulu ukugcina ukushisa isikhathi ngokwanele eside, shockproof. Konke okungenhla ukusiza ekutholeni "ukwamukelwa jikelele" eRussia.
Uma sicabangela izinto sanitary production ezifuywayo, Bas, Triton, «Aquatek», Aquanet, Alpen - abakhiqizi best of acrylic nakubhavu. Isilinganiso brand Russian ezaziwa kakhulu e okukhiphayo ukukhanya wezinkulungwane izinto ifenisha sanitary kuhlanganisa ngaphansi kwazo lezi brand. izici qualitative imikhiqizo yasekhaya akuzona nakakhulu kunalawo izinkampani European, kodwa amanani nakanjani eyamukelekayo. Lokhu kungenxa yokuthi ukubaluleka izimpahla akubandakanyi intela, duty nokunye. D. Plus, amanani aphansi ukunyusele uhlelo federal ukusekela abakhiqizi yasekhaya.
Kuhle abakhiqizi Russian ngobhavu acrylic: simo
Sekuyisikhathi ukuthola ukuthi yini abakhiqizi zokugeza zenzeke kusukela 1st 5 kule simo izinga zokukhiqiza.
1. TM Bas
Bas - nomkhiqizi best of acrylic nakubhavu eRussia. Ikhwalithi ephezulu izici umkhiqizo futhi ihlala isikhathi eside yayo inikeza kakhulu izinkomba lobuchwepheshe eziye izuzwe ngokusebenzisa imishini e inqubo ukukhiqizwa umsuka Italian futhi American. Sikugcizelele ukuthi zu Bas wenza ubuchwepheshe ezimbili. Esokuqala ukuqinisa fibre ingilazi okugeza nge a resin-polyester, kanti eyesibili - in the ukuqinisa ezimbili ingxenye polyurethane foam, okuyinto ngokuphelele ephephile kusukela iphuzu kwemvelo umbono. Ngenxa amandla nobuchwepheshe izuzwe zakamuva futhi kalula ukwakhiwa iyonke.
2. TM "Aquatech"
"Aquatech" - omunye umakhi umhlabeleli Russian of acrylic nakubhavu. Zenziwa 5-mm yabalingisi acrylic uhlobo, okuyinto kuyisihluthulelo amandla anda futhi ihlala isikhathi eside okugeza. Umkhiqizo enamathela kulula ukuhlanza futhi isikhathi eside akaphelelwa ukubukeka kwayo lemukelekako. Cishe wonke amalungu uhlelo njengoba standard abe Uhlaka kwensimbi futhi ingafinyelela usezakhele igama njengomqambi "silo ashisayo" lapho yokuxhuma izesekeli elihambisana. Bath 'Aquatech "- i ibhalansi enhle phakathi intengo kanye izinga.
3. Triton TM
Lokhu okubizwa ngokuthi "ithusi" acrylic nakubhavu. Isilinganiselwa abakhiqizi Russian kwimikhiqizo lwesithathu ezikhonjwe "Triton", okuyinto isikhathi eside impela idumela elihle emakethe yasekhaya zezwe sanitary ezaziwayo. Ngo womshini zokugeza usebenzisa izinto amazwe. At inhliziyo inqubo ukukhiqizwa - ubuchwepheshe ukuqinisa imikhiqizo fibre ingilazi nge-polyester resin.
4. TM Aquanet
Aquanet zokugeza acrylic Uyi ububanzi omangalisayo imikhiqizo, phakathi lapho ungathola imikhiqizo yazo zonke ngezindlela ezihlukahlukene futhi ayilingani. Okwavelela lokhu sesinomkhiqizo - esiphezulu bathole induduzo lapho ukugeza umzimba ngamanzi. onobuhle Iningi zinezikhathi Curves yokwakheka futhi ikhono ukuxhuma imishini hydromassage. Thini ekhiqizwa kusuka eshidini acrylic of ukushuba 5 mm.
5. TM Alpen
TM Alpen kufakwe ohlwini "abakhiqizi Phezulu acrylic zokugeza", ukubuyekezwa lapho omuhle kakhulu. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi inkampani isencane emakethe yasekhaya ka ware sanitary. Abathengi itjheje imikhiqizo high quality, kanye khona zihlale zifudumele futhi umsindo ukwahlukanisa izakhiwo, okuyinto kushiwo tehnoharakteristikah umkhiqizo ngumkhiqizi. Oholela inqubo onjiniyela lenkampani sewenze yonke imizamo yokuhlanganisa kulo mkhiqizo okungcono ukuthi ahlinzekwa ezinye abakhiqizi. Futhi kufanele kuphawulwe ukuthi lokhu inhloso kungaletha sesizogcwala.
Uhlu izinkampani ukuthi ngokukhethekile ukukhiqizwa kwe eliphezulu acrylic zokugeza, ungaya ku-futhi. Ngakho, ukujabulela ithandwa enkulu TM Vagnerplast okugeza, "1Marka», Bellrado. Nguwena ongazikhethela. Happy ukuyothenga!
Ompompi for yokugezela nge eshaweni: ubuchwepheshe wendabuko noma entsha?
Umthamo umphefumulo - Ukukhethwa sokunquma
Zangasese Umisiwe: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo. Izibuyekezo ikhasimende
Spanish Tile Ceramic (Tile)
Kazi kungani abantu nikhala?
Pancake at yogurt aluhlaza obukhulu: iresiphi ngesithombe
Zonke tolerances motor amafutha. sebhithi
Sango ishidi profiled ngezandla zakho: imidwebo, izibalo, iphrojekthi
Medical Center "Alan Clinics" Izhevsk: ukubuyekezwa, ikheli, bhala kudokotela
Nokubhamuka emva kokudla ukunambitheka omuncu
Indlela esiphatha ngayo isipatsholo? Izimpawu main kanye izimbangela zesifo